Nchegbu | Ọkọwa Okwu Ahụike
Reiki Maka Mbelata Nsogbu Gị
Mbelata Nchegbu - Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ nrụgide nke ị nwere ike inwe mgbe ọrụ gachara, Reiki bụ azịza nye nsogbu gị. N’ime nke a, ị ga ahụ ụdị ọzọ nke izu ike na nkasi obi. Reiki dị nnọọ iche na Yoga, n'agbanyeghị na ha abụọ nwere otu ebumnuche bụ isi nke ịkwalite ọgwụgwọ, izu ike na mbelata nchekasị. Ọ na-ejikwa ụdị dị iche iche nweta ikike ahụ a na-akpọ ike ike ndụ.
Agwọ Ahụhụ Nchekasị: Isi Nweta Ndụ Ka Mma
Ọ bụrụ na ihe na-esiri mmadụ ike, ahụ́ ya na-emeghachi omume ma na-emeghachi omume n'ọnọdụ ndị siri ike ma rụọ ọrụ nke ọma. Mana nke a nwere ike ịbụ eziokwu ma ọ bụrụ na ọ bụ obere nsogbu. Mgbe ogwu ahụ bilitere, nrụgide na-adị mma. Ọ na-egbochi onye ahụ ịrụ ọrụ nke ọma. N’inwe obere nsogbu, a na-akwali ahụ ka ọ rụọ ọrụ ike. Nke a bụ n'ụzọ dị mma. Ọ bụ ezie na anụ ahụ karịrị akarị, nzaghachi ya adịghị njọ. Onye ike gwụrụ enweghị ike ịrụ ọrụ ọfụma. Ahụ ya na-eme ihe dị iche iche n'ọnọdụ. Nchegbu nwere ike ibute ọrịa na ọrịa. Maka na arụ ọrụ dịịrị mmadụ, onye ahụ enweghị ike iji mmụọ ya mara ihe mgbe ọ bụla nsogbu chere ya ihu. Ọ ga-abụ onye na-enweghị ike na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma.
Nke a bụ etu Nchegbu Pụrụ Isi Na-arịa Gị Ọrịa
Nchegbu. Onye nyocha Mahadum nke Michigan na-enye nghọta ọhụrụ banyere ụfọdụ ụdị nrụgide na-emekọ ihe na mkpụrụ ndụ na-alụso ọrịa ọgụ ma nwee ike ịchịkwa otu mkpụrụ ndụ ndị a si anabata allergens, na-emesịa mee ka mgbaàmà anụ ahụ nke nrụgide na ọrịa.